Samsung waxay soo bandhigaysaa Galaxy XCover 5: taleefannada casriga ah ee dhammaan dhulka ku yaal | Androidsis
Samsung waxay soo bandhigeysaa Galaxy XCover 5: taleefannada casriga ah ee dhammaan dhulka ku yaal
In kasta oo ay run tahay in taleefannada casriga ah badankood suuqa soo galeen sannadihii la soo dhaafay, ay iska caabiyaan biyo firidhsan iyo boodh, iyagu ma ahan kuwo naxdin leh illaa aad isticmaasho dabool khaas ah. Kuwa adeegsada ama ku raaxeysanaya banaanka xaaladaha gaarka ah Samsung waxay leedahay XCover 5.
Samsung XCover 5-ka cusub ee ay shirkaddu soo bandhigtay dhawaan, waxaa loogu talagalay shaqada goobta sida warshadaha, dhismaha, dhagaxyada, kuwa jimicsiga sameeya ... halka shil ama dhaca taleefanka gacanta waxay noqon kartaa inay toos ugu tuurto qashinka.
XCover ah waxay caabbisaa dhibcaha illaa 1,5 mitir waxayna siisaa biyo IP68 iyo u adkaysi ciidda, kaas oo noo ogolaanaya inaanu quusinno terminalka muddo 30 daqiiqo ah wax ka badan hal mitir oo biyo ah, sidoo kale waxaa ku jira MIL-STD810H shahaado militari.
Intaa waxaa dheer, waxay ku daraysaa waxa Samsung u yeeray qaabka gacmo gashi, taas oo dareenka taabashada shaashadda kor loogu qaado si loogu bixiyo jawaab weyn jawi kasta. The shaashadda ayaa gaareysa 5,3 inji oo leh xallinta HD.
Waxay leedahay Ku riix shaqada hadalka, si aad ula xiriirto riixitaanka badhanka, u samee hawl gaar ah furaha jirka (wicitaanada degdegga ah, tooshashka, khariidadaha ...) waxaana ilaaliya Samsung Knox.
Gudaha, waxaan ka heleynaa processor-ka Exynos 850 oo ay weheliso 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo ah keydinta gudaha. Batariga 3.000 Mah waa la beddeli karo oo la jaan qaadaya lacag bixinta degdegga ah. Gudaha, waxaan ka helnaa Android 11
La kamaradda gadaal waxay kujirtaa dareeraha 16 MP leh fur f 1.8. Dhanka hore, waxaan ka helnaa kamarad 5 MP ah oo fure u ah f 2.2. Waxay leedahay jab NFC ah. Waqtigan xaadirka ah qiimaha lama yaqaan.
Terminalkan cusub ayaa imaan doona Yurub, Aasiya iyo Latin Amerika inta lagu jiro isla bishan Maarso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung waxay soo bandhigeysaa Galaxy XCover 5: taleefannada casriga ah ee dhammaan dhulka ku yaal
Sida looga hortago in sheekooyinkaaga Instagram la wadaago